Maxaa looga hadlay Kulankii Farmaajo & Wakiilada Beesha Caalamka? – DMS
HomeWararkaMaxaa looga hadlay Kulankii Farmaajo & Wakiilada Beesha Caalamka?
Maanta waxaa Xarunta Teendhada Arfisiyooni ee Magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iy Wakiilada Beesha Caalamka.
Kulanka oo ay dalbadeen Wakiilada Beesha Caalamka ayaa waxaa uu ahaa mid ay Albaabada u xirnaayeen, waxaana wararka la helay ay sheegayaan in looga hadlay saamaynta ay muddo kororsigu ku keentay xaaladda dalka iyo in la helo waddo looga bixi karo xiisadda siyaasadeed ee gacan ka hadalka ku dhaw èe ka taagan Muqdisho.
Wakiilada Beesha Caalamka ayaa Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa la sheegay inay cadaadis ku saarayaan sidii looga laaban lahaa muddo kororsiga ay u sameeyeen Xildhibaananda Golaha Shacabka.
Maalmihi la soo dhaafaya ayaa waxaa aad loo hadal haayay muddo kororsiga ay farmaaj u sameeyeen Xildhibaannada Golaha Shacabka, kaas oo keenay in xaalad aan wanaagsaneyn inay gasho magaalada Muqdisho.
Dhowr Jeer Wakiilada Beesha Caalamka ayaa waxaa ay soo saareen qoraalo ay uga soo horjeedeen muddo kororsiga, iyaga oo ku hanjabay inay cunaqabateyn saari doonaan dadka ku lugta leh go’aankii Baarlamaanka.
Golaha Wakiilada Puntland oo kasoo horjeestay muddo kordhinta